Muujinta Khilaafaadka iyada oo loo marayo Iskaashiga, Siyaasadda, iyo Shaqada Goobta
Rivers of American waxay isku-dubbaridaa u doodidda qaranka oo ay ka shaqeeyaan goobaha wabiyada ee muhiimka ah si ay u ilaaliyaan wabiyada, soo celiyaan wabiyada waxyeelada leh, iyo ilaalinta biyaha nadiifka ah ee dadka iyo dabeecada. Si arrintan loo sameeyo, waxay dhisaan iskaashi waxayna si firfircoon ula shaqeeyaan doodaha biyaha webiyada, ganacsiyada iyo danaha beeraha, kooxaha madadaalada, iyo kuwa kale si ay xal ugu helaan.
Wabiga Upper Mississippi River, Rivers American wuxuu ka shaqeynayaa wabiga Mississippi oo leh caafimaad dabiici ah oo dabiici ah, sida daadadka iyo qoyaanka dhulalka ah ee dib loo soo celiyo lana ilaaliyo dadka iyo duur joogta. Labadii sano ee la soo dhaafay, waxay ku guuleysteen tiro guulo.
Qeyb weyn oo ka mid ah istaraatiijiyada ururka ayaa fududeynaya isbeddel wanaagsan oo loo marayo iskaashiga ururada iyo shakhsiyaadka la wadaagaya ballan qaad si ay dib ugu soo celiyaan Webiga Upper Mississippi. Agaasimaha Blue Trails Agaasimaha Staci Williams ayaa soo bandhigay Shirweynihii Upper Mississippi River ee ku saabsan faa'iidooyinka dabiiciga ah ee dabiiciga ah, Olivia Dorothy, Agaasimaha Associated for Mississippi River Management, ayaa ku soo biiray Maareynta Weyn ee Maarso. Sanadka 2013, Rivers American waxay wada shaqeyn la yeelatay Safaaradda Holland si loo soo bandhigo "Isbedelka Isbeddelka Isbeddelka ee Mississippi," oo ah seminaaro caalami ah oo baaritaan ku sameeya xeeladaha waxqabadyada cimilada ee basaska Mississippi iyo Missouri ee Jaamacadda Washington ee St Louis.
Rivers American waxay sii wadaa inay ka hortagto hanjabaadaha Wabiga Mississippi ee ka yimaada isbeddelka cimilada, nidaamka gaadiidka oo ka baxsan, iyo dhaqanka waxyeellada beeraha. Waxay magacaabeen wabiga Upper Mississippi River oo ah mudnaanta koowaad, waxaana la samayn doonaa qorshe istaraatiijiyadeed oo 5 illaa 10 ah oo leh natiijooyinka ilaalinta qiyaasta si loo dabagalo horumarkeena.
Rivers American waxay ka shaqeyneysaa heer qaran si loo fududeeyo siyaasadaha iyo maalgalinta dhiirigeliya dib-u-habaynta maaraynta webiyada iyo ilaalinta iyo dib-u-dhiska iyo heerarka degaanka, waxay fududeeyeen kooxda daneeyayaasha Isbaheysiga Nicollet ee ka kooban cashuur bixiyaha, ilaalinta , iyo u doodayaasha deegaaneed oo diiradda saaraya dib-u-habeynta maamulka maareynta iyo howlgalada dhismaha Nidaamka Isgaadhsiinta Upper Mississippi River.